Hogaamiyaha SD muxuu ka yiri banaanbaxii maanta ka dhacay Göteborg? | Somaliska
Hogaamiyaha SD muxuu ka yiri banaanbaxii maanta ka dhacay Göteborg?
Banaabaxii kooxaha naasiyiinta ah ee goor dhow soo afjarmay ayaa waxaa walaac ka muujiyey siyaasiin kala duwan oo ka tirsan asxaabta siyaasadeed. Hogaamiyaha xisbigga SD ee Jimmie Åkesson, ayaa ka hadlay aragtidiisa iyo sida ay la tahay waxa maanta ka dhacay Göteborg .
Wuxuu sheegay in ay”maalin murugo leh u tahay siyaasadda Iswiidhan” Wuxuu sheegay oo kale in waxa u baahan in la mamnuuca ay tahay tacadiyadda.
Banaanbaxa kooxdan naasiyiinta ah ee lugu magacaabo NMR (Dhaq dhaqaaqa wax iska caabinta Noordiga), ayaa waxaa ka hadlay wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan Margot Wallström, ayaa qoraal ay barteeda facebook-ga, in “sharuud la’aan dhaleeceeyneeyso noocyada kala duwan ee cunsuriyadda, iyo cadaadinta diimaha”. Waxaa kale oo ay sheegtay in dowladu ay walaac weyn ka qabto koboca kooxahan dal ahaan iyo heer caalami, dhinacoodana halganka ay kaga jiraan la dagaalanka kooxahan ka dhanka ah xorriyadda uu yahay mid sugan.
“Wasiirka cadaaladda wuxuu haatan bilaabay dib u eegis ah in uu jiro sharci iyo xeer ah siddii xal loogu heli lahaa dhibaatadda bulsho ee ay kooxaha xagjirka ah sameeynayaan” ayey tiri Margot wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan oo dareenkeeda ku muujineeysay sida ay ugu xun tahay baanaanbaxa maanta Göteborg ka dhacay.
Hogaamiyaha xisbiga cunsuriga iyo xagjirka ah ee SD, Jimmie Åkesson, wuxuu dhacdaddii Göteborg ku tilmaamay mid maalin madow u ah siyaasadda dalka oo banaabax ku kulmiyey waxa uu ku sheegay “xag jiriinta biddix iyo middig. Hadalkan ayuu sheegay maanta mar uu ka qeybgalayey kulankii sanadlaha ahaa ee urrurka haweenka xisbigaasi ku yeesheen magaaladda Norrköping. Wuxuu sheegay in waxa u baahan in la mamnuuca ay tahay gacan ka gadalka iyo tacadigga ay reebaan kooxaha xagjirka ah waa sida uu hadalka u dhigaye,
Sweden oo cafis ka dalbatay Saudi Arabia?
Dowladda oo berito qabaneeysa shir jaraa’id ka dib mucaaradka oo kalsoonidii kala noqday
Madaxweynaha Falastiin oo maanta booqasho ku imaanaya Sweden